Zininzi iindlela zokuhlobisa ikhaya lakho (imizobo, zonke iintlobo zeenkcukacha zangaphakathi), kodwa akukho nto efanisa iintyatyambo ezintsha. Kuyinto yolonwabo lethu ikhaya, ihlabathi elimnandi kunye elihle kunye neefom. Imbali yokulima ekhaya iyonwabile kwaye ifike kuthi ukususela ekudlulileyo kweenkulungwane.
Kwaye amaYiputa amandulo afunda indlela yokukhulisa izityalo zokugcoba kwiimbiza. AmaRoma ahlobisa izityalo ezinobumba kunye neepatios zabo. Kwaye kuphela kwi-XIX ye-floriculture yekhulu leminyaka. Ngo-1790, i-hydrangea (i-hydrangea) yaziswa kwiYurophu. Uvela eChina naseJapan. Yisityalo esimnandi nesiqinileyo.
Hortensia, ekhulile ekhaya
I-Hortensia enkulu-leaved yiyo kuphela iilwanyana ezikhulayo kwiimbiza. Amagqabi anemizi ebomvu, eluhlaza okomhlaza, e-oval in shape, ephikisanayo, ecaleni kwinqanaba elinamazinyo angcolileyo okanye abukhali. Ekupheleni kwamahlumela, ama-inflorescences amahle (iipinki, ezibomvu, eziluhlaza, ezimhlophe) zenziwa. IHortensia isityalo esomeleleyo. Ukuba uthe wome, ufuna ukuwahambisa kwaye i-hydrangea iya kubuya ebomini. Kodwa abaninzi banomdla ngombuzo wendlela yokwenza i-hydrangea.
Yintoni oyifunayo ukukhula okulungileyo kunye neentyantyambo
Igumbi apho i-hydrangea iqulethwe khona kufuneka ilula, ifumaneke umoya. Nangona kunjalo, awukwazi ukubeka phantsi kwelanga elithe ngqo. Xa ukhula i-hydrangeas, kukho imigaqo emininzi eyisiseko - ukupholisa kwaye umhlaba kufuneka ube rhoqo umanzi. Ikhula kakuhle kwihlabathi eliyi-acidic. Ukunisela nokutshiza esi sityalo kuyimfuneko ngokufanelekileyo, kuba i-hydrangea ithanda amanzi. Ngentwasahlobo kuyacetyiswa ukuba uyifake kwi-balcony, emoyeni omtsha. Zonke izihlumela ezivela kwiingcambu kufuneka zikhutshwe. Ukushisa kwekamelo kulungile ngeli thuba. Ngokuqhelekileyo iintyatyambo zibomvu kwaye zibomvu, kodwa ngokuqinisekileyo unokwenza umbala wazo luhlaza okwesibhakabhaka. Ukwenza oku, sisela isityalo ngesisombululo se-alumoammonium okanye i-alumokalic alum. Ukuze i-hydrangea iintyatyambo kwakhona zibe yipinki, kufuneka nje ukuyeka ukunisela isisombululo. Ngokunyamekela okufanelekileyo, isityalo esinjalo siya kukukholisa ngeentyantyambo ezide (ukususela ngo-Ephreli ukuya ku-Oktobha). Xa isityalo sithela, sitshintshe amahlumela esiqingatha ubude. Yenza oku kude kube sekupheleni kukaJune, kuba i-hydrangeas iqhakazile emacaleni aneminyaka emi-2 ubudala. Uhlala e-hydrangea ebhodweni iminyaka engama-3-4, kwaye ke kufuneka ithathelwe indawo yityalo encinane.
Kwi-autrangea yekwindla ibeka ezinye iifishi kwaye ziqala ukungena kwindawo yokuphumla. Kuhlala iintsuku ezingama-60 ukuya kuma-80. Kulo gumbi kwiifestile kufakwa kwigalazi okanye kuthatyathwe kwisiseko. Ebusika, amanzi aqhelekanga (amaxesha amathathu ngenyanga), kwaye kubaluleke kakhulu ukukhusela ukubola kweengcambu. Ngentwasahlobo, xa amaqabunga amasha eqala ukwenza, ixesha lokunisela landa. Ngethuba lokukhula, kunye nokuphuhliswa kwemifuno, kuyimfuneko ukuqhuba ukuchumisa kanye ngeveki.
Ukuze i-hydrangea yakho ihluma kakuhle ngonyaka ozayo, emva kokuqhaqhaqhaqa iyanqunyulwa (izimpande zengcambu, izihluma zecala, zishiya ezinye ezinamandla kakhulu). Phinda uvelise izityalo kunye nezicucu ezinotshani. Ukuhlakulela i-hydrangea kwiimeko zangaphakathi kuwo wonke unyaka, kuyimfuneko yonke intsasa, xa iya kutywala, ukuyibuyisela, ithathe indawo yomhlaba omtsha kunye nenxalenye yakudala.
Emva kweentyantyambo okanye i-spring hydrangeas inokuthi inganiki iintsholongwane ezintsha. Oku kubonisa ukuba umhlaba ebhodweni iphelile. Yondla ientyatyambo okanye ukufakelwa. Ukuba kukho amabala amdaka emaqabini, hlola isityalo ngokucophelela. Ingaba sisifo sefungal. Amabala amaninzi kufuneka aphathwe ngesisombululo esenziwe nge-antifungal.
Ukuba amaqabunga amancinci aqala ukujika, kwaye iimvini zihlala ziluhlaza, kuthetha ukuba amanzi aniselayo isityalo sinomthamo omkhulu we-calcium. Yondla isityalo kunye nesichumisi (esinezixhobo zentsimbi) kwaye ke unamanzi kuphela ngamanzi athambileyo (ingaba ngamanzi emvula). Sihlawula ukutshatyalaliswa ngokufanelekileyo kweso sityalo ngohlobo oluthile lokulungelelanisa, sinomphumo onokusifumana, kwaye siphatha kwaye yonke imihla nceda amehlo ethu.
U-Aralia Manchu okanye u-aralia ophakamileyo
I-recipe ye-chili i-recipe
Iindlela zokunyamekela ngomlomo
Intsapho engapheliyo kunye neengxaki zayo eziphambili